सरकार र प्रतिपक्षको एकता ! | My News Nepal
सरकार र प्रतिपक्षको एकता !
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा अपत्यारिला घटनाहरु हुँदै आएका छन् । उएटै उद्देश्य बोकेर १० वर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादी चार टुक्रा बन्यो । एउटा थालमा भात खाएकाहरु अहिले कोही प्रतिबन्धित छन् भने कोही गृहमन्त्री ।
बुझिनसक्नुको छ नेपालको राजनीति । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पार्टी एकीकरण, विवेकशिल र साझा पार्टीको एकीकरण र फुट यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
अहिले फेरि राजनीतिमा अर्को यस्तै नयाँ घटना देखिएको छ । सरकारमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र प्रतिपक्षमा रहेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराईले शनिबार पार्टी एकीकरणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । एकीकरणको औपचारिक घोषणा भने सोमबार गरिने भएको छ ।
एकतापछि पार्टीको नाम ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ राख्ने सहमति भएको छ । नयाँ शक्ति संयोजक भट्टराईले यादवलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गर्ने भएका छन् । पार्टीमा शक्तिशाली संघीय परिषद् बनाउने र त्यसको अध्यक्षमा भट्टराई रहने भएका छन् । यो परिषद्मा एक हजार सदस्य रहनेछन् ।
केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या २५ रहनेछ । फोरमका १६ र नयाँ शक्ति नेपालका ९ पदाधिकारी एकीकृत पार्टीमा पदाधिकारीकै हैसियतमा रहने छन् ।
यादव र भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिमा भनिएको छ–‘समाजवादी पार्टी नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता, विभेद रशोषण अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’
२०७२ असोज २ मा संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएर भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए । उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहालपछिको वरीयतामा थिए । फोरमसँग एकीकरणपछि पनि उनी दोस्रो वरीयतामै रहने छन् ।
नयाँ दलप्रति आमनागरिकको विश्वास नदेखिएको र निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राखिएपछि भट्टराई बाध्य भएर एकीकरण गर्न पुगेको बताइएको छ ।
यता, फोरम र नयाँ शक्तिले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र जनमुक्ति पार्टीसँग समेत एकैसाथ एकीकरणको पहल गरेको थियो । राजपाले एकताका लागि फोरम सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सर्त राखेपछि फोरम अध्यक्ष यादवले सरकार छाड्न नसक्ने बताएपछि राजपा र जनमुक्ति विच्किएको हो ।